» अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको छोरा राष्ट्रपती भएको हेर्ने सपना सपन मै सिमित भयो! बरु आफै बने राट्रपती तर उन्को छोराले देख्नै पाएनन!आखिर किन के भयो त्यस्तो? हेर्नुहोस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको छोरा राष्ट्रपती भएको हेर्ने सपना सपन मै सिमित भयो! बरु आफै बने राट्रपती तर उन्को छोराले देख्नै पाएनन!आखिर किन के भयो त्यस्तो? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको छोरा राष्ट्रपती भएको हेर्ने सपना सपन मै सिमित भयो! बरु आफै बने राट्रपती तर उन्को छोराले देख्नै पाएनन!आखिर किन के भयो त्यस्तो? हेर्नुहोस
काठमाडौ ।अमेरिकी राष्ट्रपति पदका डेमोक्रेट उम्मेदवार जो बाइडेन जीतको धेरै नजिक पुगिसकेका छन् । जीतका लागि चाहिने २७० इलेक्टोरल कलेज भोटमध्ये बाइडेले २६४ सिट जितिसकेका छन् । अब उनलाई मात्रै ६ सिट आवश्यक छ । अर्कोतर्फ पपुलर भोटमा पनि उनी डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा झण्डै ३५ लाख भोटले अगाडि छन् ।
तर एक समय यस्तो थियो जतिबेला जो बाइडेन आफू भन्दा पनि आफ्ना छोरालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्थे । जो बाइडेन आफ्ना जेठा छोरा ब्यू बाइडेनलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाउन चाहन्थे । जो बाइडेनका दुई छोरा छन् । तीमध्येका जेठा ब्यू बाइडेन थिए र उनी राजनीतिमा सक्रिय थिए । तर, ब्यूको २०१५ मा ब्रेन क्यान्सरका कारण मृ,त्यु भएको थियो ।
बाइडेन गएको जनवरीमा एक अन्तरवार्तामा आफू नभइ ब्यू अहिलेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भिडिरहेको हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, ब्यूको २०१५ मा निधन भइसकेको छ । ब्रेन क्यान्सरका कारण नि,धन भएका ब्यूलाई जो अहिलेको राष्ट्रपति पदको दावेदार मान्दथे । जोले अहिले आफू नभइ आफ्ना छोरा ब्यू राष्ट्रपति पदको निर्वाचन लडिरहेको हुनुपर्ने बताएका थिए । जो बाइडेनको किताब ‘प्रोमिस मी ड्याड’ मा यो उल्लेख छ ।
ब्यू बाइडेन राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी २००७ देखि २०१५ सम्म अमेरिकाको डेलवायर राज्यका ४४ औं अटर्नी जनरल थिए । जो बाइडेनले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् ‘म सधैं सोच्थें कि मेरो ठूलो छोराले अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको लागि चुनाव लड्न सक्छन् र आफ्नो भाइको सहयोगले जित्न पनि सक्छन् ।’ ब्यू २००८ र २०१२ मा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामालाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने व्यक्ति पनि हुन्